teknụzụ - Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd.
Jiri ederede (pịa ya ka ị gụkwuo)
1.Choputa nguzogide nke silicon carbide kpo oku na otu ogbe tupu imeghe ngwugwu ahụ, tinye nguzogide kachasị nso n'otu mpaghara ahụ, nke ga-eme ka ọkụ ọkụ dịkwuo n'otu, nguzogide anyị ga-ede na mpaghara oyi.
2.N'ihi na silicon carbide bụ ihe siri ike ma na-emebi emebi, anwala idozi mgbe ị na-etinye ya, mee ka ọ nwee ike ibugharị dị ka o kwere mee, ọ pụtara ime ka ọ na-agagharị ma nwee ike ịpụ apụ mgbe ị wụnye. Sịlịkọn carbide kpo oku mmewere nwere ike iwunye na dangle ma ọ bụ ewepụghị.
3. Onye na-ahụ maka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ nke silicon na-eji njikwa thyristor, yabụ ike nwere ike idozi, ike e gosipụtara nke onye njikwa ahụ kwesịrị ịdị 2-3 karịa karịa mgbe ahụ egosipụtara nke ọkụ ahụ, si otú a na-eme ka ndụ silicon carbide kpo oku mmewere, jiri ya. n'ụzọ ka mma.
4.Choose ezi uche wiring ụzọ adabere size na-eguzogide nke sịlịkọn carbide kpo oku mmewere.
Ihe ọhụrụ silicon carbide kpo oku ga-eme ka ike dị nwayọ nwayọ na usoro kpo oku, mee ka ọdịiche dị n'etiti silicon carbide kpo oku na ọkụ ọkụ dị ntakịrị, si otú a na-eme ka silicon carbide kpo oku na ndụ. nnyefe ike n'ụzọ dị otu a: Buru ụzọ tinye ike na 30% -40% nke ike imewe iji kpoo 20 nkeji -40 nkeji, wee mụbaa ruo 60% -70% nke ikike imepụta ihe incubation20 nkeji -30 nkeji, mgbe a na-edozi ọnọdụ nke silicon carbide kpo oku na ọkụ ọkụ, wee bulie ike nwayọ nwayọ, voltaji edere na nke dị ugbu a ruo mgbe ọnọdụ okpomọkụ rutere ọkụ achọrọ, nke a bụ ihe nkịtị na-eji voltage na nke ugbu a nke silicon carbide kpo oku mmewere, N'ime oke ugbu a enwere ike ịtọ ya na njikwa okpomọkụ na-akpaghị aka, mgbe mgbochi ahụ ghọrọ nnukwu mmụba nke ọkụ ọkụ kwesịrị ekwesị, iji mee ka silicon carbide kpo oku iji meghee n ike ike
6. Mgbe oku ahụ kwadebere, mgbe silicon carbide kpo oku na-ekpo ọkụ anyị na-edozi tebụl dị ka ndị a: Mgbe a na-etinye ike nnyefe iji malite iji 40% ike nke ike nkịtị, kpoo nkeji 20, wee mee ka ọnọdụ okpomọkụ dị na okpomọkụ achọrọ maka minit 10 ruo nkeji iri atọ, wee debe oge ijide ya.
7.Ekwela naanị nyochaa elekere ma ọ bụ ugbu a na iji silicon carbide kpo oku, n'ihi na mgbe ị na-eji nguzogide ahụ ga-ebuwanye nwayọ (voltage ga-ebuwanye ibu ma ugbu a ga-adị obere), mgbe ike ntinye na-adịgide, mgbe ahụ ọnọdụ okpomọkụ dị mgbe niile.
8.Ọ bụrụ na etinyere ihe na-ekpo ọkụ na silicon carbide mgbe o jiri ọnwa ole na ole, agbanwela maka nke ọhụrụ, gbanwee maka ihe eji eme ihe na-ekpo ọkụ nke silicon carbide, nke ahụ bụ n'ihi na nguzogide ahụ ga-ebuwanye ibu mgbe o jiri ya mee ihe, nguzogide nke ọhụrụ dị obere, ma ọ bụrụ na ị na-eji nke ọhụrụ ahụ okpomọkụ ga-adị iche na silicon carbide kpo oku mmewere, yabụ ị nwere ike ịgbanwe nke ejiri mee ihe, nke ga-eme ka mmegide nke ihe ọkụkụ dị nso.ọ bụrụ na ịnweghị kpo oku ejiri mmewere, biko gbanwee ihe ọkụ niile na nke ọhụrụ, wee jiri nke ị nwere ike ịgbanwe mgbe ịchọrọ ya.
9. Nguzogide ahụ ga-ebu ibu mgbe ị na-eji ihe ọkụ ọkụ, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ agaghị enwe afọ ojuju mgbe voltaji ruru nke kachasị elu, biko gbanwee njikọ ahụ, dị ka njikọ n'usoro nwere ike ịgbanwe na ihe yiri, njikọ kpakpando gbanwere Delta njikọ, ị kwesịrị ịgbanwe njikọ dabere gị njikwa.
10.Ogha oxide na slag na ihe ndị ọzọ dị n’ime ọkụ ga-ekpochapụ n’oge, echekwala ha n’ọkụ, ọ bụrụ na ha ejiri ihe na-ekpo ọkụ wee mebie ya.
11.Continuous iji ga-aba ogologo ndụ karịa intermittent eji.
12.What ị chọrọ ikpo ọkụ ekwesịghị inwe oke mmiri dị elu, iji gbochie ihe ọkụ ọkụ ọkụ, gbalịa izere ịkpọtụrụ ihe na alkaline.
13.The okpomọkụ nke sịlịkọn carbide kpo oku mmewere elu ekwesịghị gafere 1550 ℃.
Mkpuchi (pịa ya ka ị gụkwuo)
SICTECH Silicon carbide kpo oku mmewere mkpuchi bụ ụdị sịntetik ihe nkiri, nke na-ekpuchi elu nke mpaghara ọkụ mgbe emechara silicon carbide kpo oku mmewere, ọ nwere ike ịgbatị ndụ nke silicon carbide kpo oku mmewere na pụrụ iche iji gburugburu ebe obibi, Enwere ike ikewapụ ya na gas iji mee ka ịka nká nke silicon carbide kpo oku mechie, iji kpuchido ihe ọkụkọ silicon carbide kpo oku, maka nkọwa ndị ọzọ nke mkpuchi biko lee okwu na-esonụ:
1. T mkpuchi: mkpuchi a na-eji maka obere oxidation ọnụego na nkịtị were, mee ka sịlịkọn carbide kpo oku mmeba ịgbatị na-arụ ọrụ ndụ nke 30-60%.
2. D mkpuchi: mkpuchi a na-eji ihe banyere nitrogen
3. S mkpuchi: a mkpuchi na-eji na atọ na-adọ mkpara (W ụdị sịlịkọn carbide kpo oku mmewere) ise n'elu iko
4. Q mkpuchi: mkpuchi a na-eji ihe banyere uzuoku ma ọ bụ hydrogen
Gburugburu Mmetụta Mkpebi Uwe akwadoro
Alụlụ A na-ebipụ ndụ onye na-ekpo ọkụ ihe na-erughị otu ụzọ n'ụzọ ise nke ndụ a tụrụ anya n'okpuru ọnọdụ ikuku ghere oghe. Ọ dị mkpa ibuli okpomọkụ ahụ mgbe ịsachachara mmiri zuru oke na obere okpomọkụ mgbe ịmalite ọkụ ọkụ ọhụrụ ma ọ bụ ịmalite iji otu mgbe ogologo nkwusioru. Uwe uwe
Mmiri hydrogen iguzogide na-abawanye ngwa ngwa ma ike ya na-emebi ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ karịa 1350 ° C na ikuku ikuku hydrogen. Agbanyeghị, ndụ ọrụ dabere na ike mmiri mmiri gas. A na-atụ aro ka a jiri ya mee ihe na okpomọkụ nke na-erughị 1300 Celsius C n'ime ụlọ ọkụ. A na-atụ aro ka a rụọ ọrụ dị elu dị ka o kwere mee. (5W / cm2)
Mmiri nitrogen Mmiri nitrogen na-emeghachi na silicon carbide, na-akpụ silicon nitride mgbe ọnọdụ okpomọkụ karịrị 1400 Celsius C, nke a na-ebelata ndụ ọrụ. Banyere mmiri mmiri, ọ bụ otu ihe ahụ dịka n'ihe banyere hydrogen. A na-atụ aro ka a jiri ya mee ihe na okpomọkụ nke na-erughị 1300 Celsius C n'ime ụlọ ọkụ. Ọ na-atụ aro ka elu ibu a ga-ebelata ka o kwere mee. (5W / cm2)。 D kootu
Amonia gbanwere gas (H275%) 、 (N225%) Nke a bụ otu ihe ahụ na nke hydrogen gas na nitrogen gas. A na-atụ aro ka a jiri ya mee ihe na okpomọkụ nke na-erughị 1300 Celsius C n'ime ụlọ ọkụ. A na-atụ aro na a ga-ebelata ibu elu dị ka o kwere mee. D kootu
Mkpokọta mmeghachi omume gas (N2 、 CO 、 CO2 、 H2 et CH2etc.) Rere ure hydrocarbon na-arapara n’elu ihe na-eme ka ihe kpoo ọkụ ma nwekwaa ike ibute ije dị mkpirikpi n’ime ikuku gụnyere hydrocarbon. Ọ dị mkpa iji gbaa carbon n’ọkụ site n’oge ụfọdụ iwebata ikuku n’ime ọkụ ahụ. Ekwesiri ime ka oku oku a na uzo di iche n'etiti EREMA ihe ndi kpo oku iji gbochie mkpirisi. D kootu
Sọlfọ gas (S 、 SO2) A ga-emebi elu nke ihe ndị na-ekpo ọkụ na nguzogide na-abawanye ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ nke EREMA karịrị 1300 Celsius. Jiri ihe eji ekpo oku n'okpuru 1300 Celsius. D kootu
Ndị ọzọ Ihe dị iche iche, nke sitere na ihe ndị a haziri ahazi n'oge mgbatị ahụ, gụnyere ihe ndị dị ka isi, antimony, alkali na alkaline ụwa, yana oxides, ogige kemịkal ya nwere ike ịrapara mgbe ụfọdụ na ihe ndị na-ekpo ọkụ wee mebie ha. Ọ dị mkpa iwepụ ihe ndị a tupu oge eruo ma ọ bụ kpochapụ ha site na ịwụnye ọdụ ụgbọ mmiri. S kootu
Njirimara eletriki, akụrụngwa kemịk (pịa ya ka ị gụkwuo)
SICTECH Silicon carbide kpo oku ihe na-adabakarị ntaneti nwayọọ, nhazi nke Silica na mmụba na nguzogide eletriki, nke a na-akpọ mmebi mgbe ọ na-eji ya. E gosipụtara mmeghachi omume oxidation na usoro na-esonụ.
Silicon carbide (SiC) na-eme ikuku oxygen (O2) na ikuku na elu nke ihe ndị na-ekpo ọkụ na-eji nwayọọ nwayọọ eme ka oxides, na-akpụ Silica (SiO2), nke bụ insulator, ebe ego ya na-abawanye. Nke a na - eme ka mgbochi eletriki dị elu. Oxidation na-eme mgbe ọnọdụ okpomọkụ ruru 800 Celsius C ma mee ngwa ngwa ka ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye. Otito oxidation ga-eme na mmalite nke ojiji, mana ọnụego oxidation ga-eji nwayọọ nwayọọ belata. a na-atụ aro njedebe ndụ ọrụ ka ọ bụrụ mgbe mgbochi ya na-abawanye ruo ihe dịka ugboro 3 nguzogide mbụ. (Ndụ LD na LS na-adịgide ruo mgbe iguzogide ruru ugboro 2 nke mbụ). Ihe kpatara ya bụ na, na-erute ihe dị okpukpu atọ, mgbanwe dị na nguzogide nke ọ bụla na-abawanye na nkesa ọkụ kwa otu mmezi na-akawanye njọ, na-eme ka nkesa ọkụ na-adịghị arụ ọrụ n'ime ụlọ ọkụ ahụ.Ọzọkwa, silicon carbide kpo oku, mgbe ị na-abịa na njedebe nke ha ndụ, na-akpata ọ bụghị naanị iguzogide na-abawanye mana mgbanwe na porosity pụtara na mmebi nke mgbaji site na njọ na ike, yabụ a ga-akpachara anya.